Hanti Dhawrka Somaliland Oo Albaadda U Xidhay Xafiisyadda Shirkadda SRM Oo Maamusha Amaanka Madaaradda Dalka | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Hanti Dhawrka Somaliland Oo Albaadda U Xidhay Xafiisyadda Shirkadda SRM Oo Maamusha Amaanka Madaaradda Dalka
Hargaysa (SDWO): Hanti dhawrka guud ee qaranka jamhuuriyadda Somaliland ayaa albaabadda u laabay xafiisyadda maamulka iyo xisaabaadka ee shirkadda maamusha amaanka madaaradda Somaliland oo magaceedda loo soo gaabiyo SRM.
Axmed Yuusuf Dirir, hanti dhawraha guud ee Somaliland ayaa shaaca ka qaaday in ay Salaasadii doraad xafiiska lacag qabashadda iyo ka maareeyaha shirkadda SRM ay xidheen, isla markaana ay ku dhejiyeen waraaqda amarka ah in aan la furi Karin la’aanta hanti dhawrka.
Inkastoo aanu hanti dhawruhu cadaynin sababta rasmiga ah ee keentay in ay xidhaan xafiisyadda maamulka iyo xisaabaadka ee shirkadda SRM, tallaabadaasi oo uu ku tilmaamay in ay tahay shaqadoodda dastuuriga ah in hanti dhawrku xidhi karro xafiiskastoo dakhli lacageed qabanaya.
Hase yeeshee kadib markii ay shalay baadhitaan kedis ah ku sameeyeen labadda xafiis ee shirkadda SRM in ay go’aan sadeen in la xidho labadaas xafiis, xili ay labadii qof ee masuulka ka ahaa ku maqan yihiin dalka dibadiisa.
“In aanu xidhno xafiis dakhli qabanaya waa shaqadayadda maalin laha ah ee aanu qaranka u hayno. Tanina waxay ka mid tahay shaqadayadda aanu qaranka ugu xil saaranahay. Way jirtaa in aanu shalay tagnay xafiisyadda shirkadda madaaradda Somaliland ugu xil saaran amaanka ee SRM la yidhaahdo.
Sharciga ayaa noo fasaxaya, haddii uu yahay midka uu baarlamaanku ansixiyay, ee takaaliifta madaaradda iyo ka 26/2016 ee xeerka hanti dhawrka guud ee qaranka” ayuu yidhi Axmed Yuusuf Dirir, oo maanta la hadlay telefishanka ERYAL.
Isagoo hadalkiisa sii watayna waxa uu yidhi “Anagoo waajibaadkayagii dastuuriga ahaa fushanayna, ayaanu shaqadaas galnay, waanay jirtaa in aanu xidhnay ama waraaq ku dhejinay xafiiska lacagaha iyo xafiiskii maamulaha shirkadda SRM, iyadoo ay labaduba magaaladda Dubai ku maqan yihiin.
Markaa waa in ay noo sii xidhnaadaan intay labadda masuulba imanayaan, si ay baadhistayadu u sii socoto. Wixii war ah-na waxay ka soo bixi doonaan marka aanu baadhsita dhamayno ee shaqadayadda qabsano”.
Geesta kale shirkadda SRM oo xafiiskeedda guud ku yaallo agagaarka garoonka diyaaradaha magaaladda Hargaysa oo ah shirkad gaar loo leeyahay, isla markaana qaabilsan ilaalinta amaanka madaaradda diyaaradaha Somaliland.
Taasoo dhinaca amaanka garoomadda diyaaradaha Somaliland maamulaysay muddo ku siman 5 sanadood, waxaana la sheegay in shirkadaasi ay dalka timid xiligii uu Maxamuud Xaashi Cabdi ahaa wasiirka duulista Somaliland.
Iyadoo ay jiraan wararka qaar sheegaya in wasiirkii hore Maxamuud Xaashi Cabdi uu isaga laftiisu sheer ama qayb ku leeyahay shirkadaasi.
Dhinaca kale maareeyaha guud wakaaladda duulista iyo madaaradda Somaliland duuliye sare Cabdi Maxamed Rodol, oo aanu marar badan isku daynay in aanu arrintan wax ka waydiino ayaanay noo suurto gelin.